Political Page ပုလဲသွယ်: Facebook မှာစကားပြောခြင်း (၅)
မူလတန်းပြကနေ တက္ကသိုလ်ဆရာအထိ အရည်အချင်း နတ္ထိ။ (၁၉၈၈ နောက်ပိုင်း ဘွဲ့ရ ဆရာအားလုံးပါဝင်ပါသည်။)
ကျောင်းပရိဝုဏ်အတွင်း၌ တိုက်စစ်ဆင်ခြင်း (ကာတွန်း) မောင်သာချို
- SweSwe Winn likes this.
- Okkar Thet Naing တုတ်ရှည်ရှည်ဖြင့်တော့ မရမ်းသင့်ပါ
- U Aung Hlaing U မယုံလျှင် ယေဘူယ အရည်အချင်းအား တပြည်လုံး အတိုင်းအတာနှင့် စစ်တမ်း ကောက်ကြည့်နိုင်ပါသည်။ တယောက်စ နှစ်ယောက်စ ချွင်းချက် နဲ့ ပျမ်းမျှ ရှိသင့်တဲ့ အရည်အချင်းလောက် ရှိသူကတော့ နဲနဲ ရှိနှိုင်ပါသည်။ ပျမ်းမျှ ရှိသင့်တဲ့ အရည်အချင်းလောက် ရှိသူဟု သာဆိုလိုပါသည်။ သို့သော် ပျမ်းမျှ အရည်အချင်း ရှိသူပင် တနိုင်ငံလုံး အတိုင်အတာအရ ၁%မကျော်ပါ။
- Okkar Thet Naing မည်သို့ပင်ဆိုစေ .. (၁၉၈၈ နောက်ပိုင်း ဘွဲ့ရ ဆရာအားလုံး ပါဝင်ပါသည်။) ရေးထားပါတယ်။ ၈၈ နောက်ပိုင်း စာသင်တဲ့ ကလေးတွေမှာ ဒီလို စိတ်မျိုး ဝင်သွားမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ စိတ်ဓါတ်ကို ဖြတ်ဆီးတာ ဆိုးပါတယ်။ ၈၈ နောက်ပိုင်းမှာ အတွေးအခေါ်မြင့်မားတဲ့ သူတွေ မပါလာဘူးလို့ အာမခံနိုင်ပါသလား။ ၈၈ အရင် ပိုင်းအားလုံးကတော့ အရည်ချင်း ပြည့်ဝတယ်လို့ အာမခံနိုင်ပါသလား။ ဒါကြောင့် ဝါးလုံး ရှည်နှင့် မရမ်းစေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။7days News Journal မှာ ဆောင်းပါးကို အပြည့်အဝလက်ခံပါတယ်။ အမှန်ဆိုတာလည်း မငြင်းပါ။ ကျွန်တော်တို့လည်း ခံစားခံရပါတယ်။ လက်လည်းလက်ခံပါတယ်။ ၁၉၈၈ နောက်ပိုင်း ဘွဲ့ရ ဆရာအားလုံးပါဝင်ပါသည် (အားလုံး) ဆိုတာ လုံးဝကို လက်မခံပါ။
- U Aung Hlaing U လွတ်လပ်စွာ ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။ အဖြစ်မှန်သိမှ၊ အမှန် ပြန်ဖြစ်နိုင်ပါမည်။ စိတ်ဓာတ် ပျက်စီးမှာစိုးသည်ဟူသော အကြာင်းပြချက်ဖြင့် အကုန်အအောင်ပေး ပညာရေးစနစ်တွင် ၁ဝတန်းအောင်လာသော ကလေးများ အများစု ပိုညံ့ကြပါသည်။ နောက်တခု နားလည်ရန်မှာ ကျောင်းဆရာ တယောက်အနေဖြင့် သတ်မှတ်နိုင်သော နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းအရ ညံ့သည်ဟု ဆိုလိုပါသည်။ နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းအရ ညံ့သော ဆရာများက သင်နေခြင်းကြောင့် နိုင်ငံတကာ စံချိန်မှီ တော်သောတပည့်များ မပေါ်ထွက်နိုင်ပါ။ တော်သော တပည့်အများစုသည် တော်သောဆရာ ကြောင့် မဟုတ်ပဲ မိဘတော် (မိဘက သဘောပေါက် နားလည်မှုရှိရှိ ပံပိုး) ၍ဖြစ်ပါသည်။ စာပေးစာယူဖြင့် ဘွဲရပြီး ဆရာပြန်လုပ်သူများ ပိုညံ့ကြပါသည်။ အရည်အချင်းညံ့ရုံမက ကြိုးစားအားထုတ်သင်ကြားခြင်း၊ စေတနာထား သင်ကြားခြင်းလဲ မရှိသလောက်ပါ။
- Tint Swe ဆရာ-ဆရာမ ဆိုတဲ့ လူတွေကို အပြစ်မတင်သင့်ပါ။ ပညာရေး၊ စီးပွါးရေး စနစ်တွေ၊ အထွေထွေ အာနည်းမှုတွေ၊ ထိပ်ဆုံးကနေ လိမ်ညာမှုတွေကြောင့် ကျောင်းဆရာ-ဆရာမတွေလဲ ဆရာဝန်တွေ၊ ပညာရှင်တွေလိုဘဲ အားလုံး ခံကြရတဲ့အထဲ ပါနေကြရတာ ဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံရေး၊ နိုင်ငံအရေးကိုဘဲ သတ္တုချရမှာပါ။ အကြောင်းရင်းရှာပြီး အကောင်းပြင်စရာ ဝိုင်းလုပ်ကြရမှာပါ။ လက်ရှိ မြန်မာဆရာ-ဆရာမတွေလဲ ပြင်ပေးတဲ့အထဲ ပါကြရမှာပါဘဲ။ တိုင်းတပါး ဆရာ-ဆရာမဆိုတာ နည်းနည်းသာ ပါရလိမ့်မယ်။
- U Aung Hlaing U စနစ်ကို လွှဲချနေတာ အတိုင်းအတာ တခုထိပဲ လက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တဦးချင်းရဲ့ စိတ်စေတနာအရကိုက ညံ့နေတာတွေကတော့ မျက်မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။
- Okkar Thet Naing ၈၈ နောက်ပိုင်းဆိုလျှင် ၈၈ မျိုးဆက် ညံ့ဖျင်းခဲ့သောကြောင့်ဟု ဆိုလိုလျှင်ရော?
- U Aung Hlaing U စနစ်ကြောင့် ညံ့ပေမဲ့ တပည်တွေကို တော်စေချင်တဲ့ စေတနာနဲ့ ကြိုးစားရင် တော်တဲ့ဆရာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဆရာများ မခံချင်စိတ်နဲ့ ကြိုးစားရင်တော့ အမြတ်ပေါ့။
- Tint Swe လူတဦးချင်းညံတာ၊ တော်တာ နေရာတကာမှာ ရှိပါတယ်။ အာစရိယဂုဏ်ကိုတော့ ကျွန်တော်တော့ ကိုယ့်ကိုစာသင်ပေးသူ မဟုတ်လဲ လေးစားပါတယ်။
- Marlar Nyein Eeee အဲဒါဘဲ အဲဒါဘဲ အဲဒါအမုန်းဆုံးဘဲ။ ကြားထဲကငါတို့မှာ senior ကလည်း အထင်မကြီး junior တွေကလည်း အထင်သေးနဲ့ ... ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင် ယုံကြည်မှုမရှိချင်တော့ဘူး
- U Aung Hlaing U ဒေဝဒတ်လို ဆရာမျိုးတွေ မပေါ်ပေါက်ဘို့ ဝိုင်ဝန်း ကြိုးစားရမှာပါ။
- Tint Swe ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။ တခုရှိတာက ဒေဝဒတ်က နန်းတော်မှာလာသင်ပေးတယ်ဗျ။
- U Aung Hlaing U ကျွှန်တော်ကတော့ သင်္ကန်းရုံထားတိုင်း ဘုန်ကြီးလို့ မသတ်မှတ်ဘူး။
- Tint Swe ဒါလဲ မှန်တာဘဲ။ ဘာသာရေးမှာလဲ အဲလိုရှိနေတယ်။ ကိုးကွယ်တဲ့သူရှိလို့ အဲလိုသင်္ကန်းဝတ်တွေ လာဘ်လာဘရပြီး၊ မင်းကနေ ဆရာတင်တော့ ဒေဝဒတ်တန်ခိုးကြီးတယ် မဟုတ်ပါလား။
- U Aung Hlaing U ဒါကြောင့် အဖြစ်မှန်သိမှ၊ အမှန် ပြန်ဖြစ်နိုင်ပါမယ်လို့ ယုံကြည်လို့ တဲ့ဒိုးရေတာပါ။
- Tint Swe သဘောမတူစရာ မရှိပါ။ တခါတလေ တကြောင်းတည်းရေးမိရင် လိုရာမရောက်တတ်ဘူး။ ရှည်ပြန်ရင်လဲ မထိရောက်ဘူး။
- SweSwe Winn အဲဒါ အလွန်မှန်ပေါ့ရှင်...
- U Aung Hlaing U အထင်ကြီးတာမကြီးတာက သူများကိစ္စ၊ ကိုယ်ကိုယ်ကို မယုံတာ ကိုယ်ကိစ္စ။ သူ့ကိစ္စ ကိုယ်ကိစ္စ မရောထွေးစေသင့်ပါ။
- Tint Swe ဟုတ်တယ်ဗျာ။ ရိုးရိုးနေကြသူတိုင်း ပုစွန်ဆိပ်ခေါင်းလို အညစ်အကြေးတွေလာအစုခံရတာ ကိုယ့်ခေါင်းပေါ်လို့ ထင်နေမိကြရတယ်။ ယုံကြည်စိတ်နည်းစေတာ တကယ်ဖြစ်နေကြတယ်။ အရေအတွက် မနည်းလှဘူး။ စိတ်ဝေဒနာကုသလိုတောင် လုပ်ယူရမယ်။ ရုပ်ပိုင်းသက်သာလာမှုရှိလာရင်တောင်မှ ဒီခံစားချက်ကိုပြင်ဘို့ လိုအုံးမယ်။
- Tin Htwe ဝေဖန်ခွင့်ပြုပါရှင်။ တင်တဲ့ Post ကတကယ့်ကို အပြုသဘောဆောင်တဲ့ တန်ဖိုးရှိလှတဲ့ Post တစ်ခု ဖြစ်ပေမယ့် Status မှာရေးလိုက်တဲ့စာ ၂ ကြောင်းကတော့ အရုပ်ဆိုးတယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။ ဆရာ၊ဆရာမတွေအားလုံးကို တစ်ယောက်ချင်း လိုက်တိုင်းတာစစ်ဆေးထားတာမဟုတ်လို့ ဒီလိုမျိုးရေးသားဖို့တော့ မသင့်ဘူးလို့ စိတ်ခံစားမိပါတယ်။
- U Aung Hlaing U အကြံပြုတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကိုယ်တ်ိုင်ကတော့ ယေဘူယသဘောအရ ခြုံကြည်ရင် ရေးထားတဲ့အတိုင်း အမှန်လို့ပဲ ယနေ့အထိ ယုံကြည်ပါတယ်။ ဆရာများ မခံချင်စိတ်နဲ့ ကြိုးစားရင်တော့ အမြတ်ပေါ့။ ဝိုင်းရန်တွေ့ရင်လည်း သက်သေနဲ့တကွ ရှင်းနိုင်ပါတယ်။ အဖြစ်မှန် သိမှ၊ အမှန် ပြန်ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်လို့ တဲ့ဒိုးရေးတာပါ။
- Nan Aye ပညာရှင်တွေ၊ နားလည်တတ်ကျွမ်းသူတွေ ဝေဖန်ထောက်ပြထားတာ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ အခုတစ်လော ကြားမိတာက အဝေးသင်နဲ့ ဘွဲ့ရတဲ့သူတွေကို အစိုးရဌာနတွေမှာ အရာရှိမပေးဘူးဆိုတာ။ ဒါဟာ အခြေအနေကြောင့် အဝေးသင်တက်ရတဲ့သူတွေ၊ ဥပမာ - ကျွန်မတို့အရွယ်တွေပေါ့။ ၈၈ တုန်းက ငါးတန်း၊ ကျောင်းတွေပိတ်၊ နောက် ၉၆-၉၇ ဆယ်တန်းအောင်ပြီးတော့လည်း တက္ကသိုလ်တက်ဖို့ သုံးနှစ်စောင့်ရတယ်။ ဒီလို ပညာရေးလမ်းတစ်လျှောက်မှာ ဆူးညောင့်တွေကြောင့် နှောင့်နှေးရတဲ့သူတွေက အချိန်အကုန်မခံနိုင်လို့ Day မတက်ပဲ။ အခြေအနေအရ အဝေးသင်တက်ခဲ့ရသူတွေအများကြီး။ အဝေးသင်နဲ့ ဘွဲ့ရပေမယ့် သက်ဆိုင်ရာပညာရပ်တွေကို အပြင်မှာ လေ့လာဆည်းပူးတဲ့သူတွေ လည်း အများကြီး။ သူတို့အသိအမှတ်ပြုဖွင့်ပေးတဲ့ တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ကို သူတို့က အသိအမှတ်မပြုဘဲ အရာရှိမပေးဘူးဆိုတာကတော့ ဒါက စနစ်ရဲ့သားကောင်တွေ ဖြစ်ရတယ်လို့ဆိုရမှာပဲ။ အဝေးသင်နဲ့ပြီးတဲ့သူတိုင်းကို မတတ်ဘူး။ မသိဘူး။ ဒါကြောင့် အရာရှိစာမေးပွဲဖြေခွင့်မပေးဘူး။ အရာရှိမပေးဘူးဆိုတာကတော့ ဝါးလုံးရှည်နဲ့ ရမ်းသလိုပဲ။ ကျွန်မက အစိုးရဝန်ထမ်း မဟုတ်ပါဘူး။ နောက်လည်း အစိုးရဝန်ထမ်း လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မ ခံစားမိတာလေးတစ်ခုကို တွေးမိ၊ ရေးမိတာပါ။
- Tint Swe အဲလိုသာဆိုရင် ကျွန်တော့် အတွေ့အကြုံလေး ရေးပါရစေ။ ၁၉၇၂ MBBS ဆေးပညာဘွဲ့ရသူတွေထဲက ရာထူးဝန်အဖွဲ့မှာ အင်တာဗျူးပြီးတော့ အတန်းအစားတခုခွဲထုတ်တယ်။ ရာထူးဝန်က ဗျူရိုကရက်များပေးတဲ့အမှတ်နည်းသူတွေကို Junior Assistant Surgeon (JAS) အငယ်တန်း လက်ထောက်ဆရာဝန်ဆိုပြီး ၃၂ဝ ကျပ် အငယ်တန်းအရာရှိ လစာစကေးနဲ့ခန့်တယ်။ ကျွန်တော်လဲ အငယ်တန်းထဲပါတယ်။ သိပ်တော့မကြာပါဘူး။ တနှစ်တောင်မပြည့်ခင် ပြန်ပြင်လိုက်တယ်။ ဆေးပညာတော့ သူများနည်းတူ တတ်ခဲ့ပါတယ်ဗျာ။ အခုပညာရေးဝန်ထမ်းတွေအတွက်လဲ စဉ်းစားပေးသင့်တယ်။ ဘွဲ့နောက်မှာ အဝေးဘွဲ့လိုများပါသလားတော့ မသိဘူးပေါ့။
- Nan Aye ဝင်ပြီး ဆွေးနွေးပေးတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။ ကျွန်မဆို အဝေးသင်နဲ့ ကျောင်းပြီးတယ်ဆိုပေမယ့် တကယ်ကျက်၊ တကယ်မှတ်ပြီး အောင်ခဲ့တာပါ။ စာကျက်ရင်လည်း အော်ကျက်တတ်လို့ တချို့က အဝေးသင်ကျောင်းသားလို့ မထင်ဘဲ ဆယ်တန်းကျောင်းသားလို့တောင် ထင်ကြတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တော့ လိပ်ပြာသန့်ပါတယ်။ မုံရွာမှာ အဝေးသင် စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် တက်တုန်းက စာမေးပွဲအောင်ဖို့ တော်တော်ကျက်ယူရတယ်။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆို စာမေးပွဲဖြေဖို့ ငါးရက်အလိုလောက်မှလာပြီး Q ၀င်သွားတယ်ဆရာ။ တော်တော်အံ့သြရတယ်။ သူဆို စာကျက်ဖို့ သမီးဆီက ကူးယူရတာ။ သူက တစ်ဖက်က B Tech တက်နေတော့ အတွက်အချက်မေဂျာတွေကိုတော့ မပြောလိုပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ Eco လို ကျက်စာတွေကို Q ၀င်အောင်ဘယ်လိုကျက်သလဲဆိုတာတော့ မပြောတတ်ပါဘူးဆရာ။ အဲဒီတုန်းက ကျောက္ကာလမ်းမကြီးမှာရေးထားတဲ့ "သတိ၊ စာမေးပွဲရှိသည်" ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ကို "သတိ စာခိုးပွဲရှိသည်" ဆိုပြီး ကျောင်းသားတွေက နောက်ပြီးပြင်ထားတယ်။ အဲဒီလိုလေးတွေလည်း ရှိပါတယ်ဆရာ။ အဓိကကတော့ ဆရာ။ တတ်တယ်၊ မတတ်ဘူး၊ သိတယ်၊ မသိဘူးဆိုတာတွေကို ဘာပေတံတွေနဲ့ တိုင်းသလဲဆိုတာကို နားမလည်နိုင်တာပါဆရာ။